LEGO Boost bluetooth जडान गर्नको लागि ट्रिक गर्नुहोस् जब यो जोडी हुँदैन - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> खिलौने >> LEGO Boost ले ब्लुटुथ जडान गर्दैन
मुख्य समस्या मैले यो समयमा सामना गरेको छु LEGO Boost रोबोट त्यो हो जुन उपकरण (ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन) मा निर्भर गर्दछ ब्लुटुथका लागि जोड्न धेरै गाह्रो हुन्छ। मेरो केसमा यसले BQ एक्वेरिस एक्स प्रोसँग राम्रोसँग काम गर्दछ, र Huawei T5 र Samsung A7 सँग नराम्रा साथ।
जब हामी लेगो एसेम्ब्ली स्क्रीनहरू अगाडि बढ्छौं, एक समय आउँदछ जब हामीले रोबोटको परीक्षण गर्नुपर्दछ र ब्लकको साथ प्रोग्राम गर्न सक्षम हुनुपर्दा यसलाई ब्लूथुथ मार्फत जोड्नु पर्छ। सुरुमा यो मूभ हबमा हरियो बटन थिच्नु जत्तिकै सजिलो हुनुपर्दछ जुन रोबोटको मुख्य ब्लक हो।
तर जब धक्का काम लाग्छ, चीजहरू अक्सर जटिल हुन्छन्।
धेरै परीक्षण पछि यो लाग्छ मैले एउटा विधि पाएको छु जुन राम्रो छ र त्यसले हामीलाई मद्दत गर्न कोशिस गर्न र हाम्रो स्नायुहरूमा समाप्त हुन समय खर्च गर्नबाट रोक्छ।
मेरो लागी यो मेरो लागि समयको १००% काम गर्दछ। म एक भिडियो छोड्छु र ट्यूटोरियल परम्परागत ढाँचामा चरणहरूमा लेख्दछु।
मैले सिर्जना गरेको छु गहिरो मा मूभ हब जान्नको लागि गाईड गर्नुहोस्
ट्याब्लेट वा स्मार्टफोनको ब्लुटुथ कसरी LEGO Boost Mov Hub मा जडान गर्ने
चरण by-चरण समाधान जब तपाइँ ब्लुटुथ मार्फत जडान गर्नुहुन्न
लेगो बूस्ट अनुप्रयोगबाट निस्कनुहोस्।
ट्याब्लेटको ब्लुटुथ निष्क्रिय गर्नुहोस्।
तपाईंले पहिले छोड्नु भएको स्क्रिनमा अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यसले तपाईंलाई बताउँछ कि तपाईंले प्रविष्ट गर्न ट्याब्लेटको ब्लुटुथ सक्रिय गर्नु आवश्यक छ
सार्नुहोस् हबमा हरियो बटन क्लिक गर्नुहोस्
तपाईं ट्याब्लेटमा त्यो विकल्प चयन र सक्रिय गर्नुहोस् र अनुमतिहरू स्वीकार्नुहोस्
र भोईला, तपाईं तत्काल जडित हुनुहुन्छ।
तपाइँ जान्नुहुन्छ कि यो जोडिएको छ किनकि सार्नुहोस् हबको नेतृत्वमा निलो हुन्छ। तलको छविमा यो जोडा बनाइएको छ। नेतृत्वमा हेर्नुहोस्
पिन अवस्थित छैन
माथिको विधि पत्ता लगाउनु अघि, मैले बूस्ट र ट्याब्लेटलाई सिधा ट्याब्लेटको ब्लुटुथ विकल्प प्रयोग गरेर पेयर गर्ने प्रयास गरें। तर जब तपाईं तिनीहरूलाई पेयर गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ यसले पिनको लागि सोध्छ।
ठिक छ, त्यो पिन अवस्थित छैन, मैले त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग प्रयास गरें जुन सामान्यतया ०००००, १२0000, इत्यादि प्रयोग गरिन्छ। तर आधिकारिक LEGO वेबसाइटमा जानकारी खोज्दै उनीहरूले चेतावनी दिन्छ कि हामी यसलाई यस तरिकाले जडान गर्न सक्दैनौं किनकि त्यो पिन छैन। अवस्थित
LEGO Boost को बारेमा
यदि तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ भने LEGO Boost के हो? हाम्रा प्रभावहरू नभुल्नुहोस्।
यो बच्चाहरूको लागि डिजाइन गरिएको रोबोट हो। यसले मलाई राम्रोको लागि आश्चर्यचकित गरेको छ, मैले सोचे कि यो अधिक सीमित हुनेछ, तर धन्यवाद स्क्र्याच कार्यक्रम को हिस्सा सरलीकृत गरिएको छ र LEGO सँग भेला भएकोमा धन्यवाद हामी सजिलै हाम्रो रोबोटको असीमित भिन्नताहरू बनाउन सक्छौं।
ब्लगमा हामीले यस अवसरमा कुरा गरेका छौं रोबोटहरू अर्डिनोको साथ बनेको छ तर ती बच्चाहरूसँग धेरै कम मैत्री छन्। यो केवल मेरो-बर्षेली छोरीबाट मात्र भेला भएको छ र अनुप्रयोगमा निर्देशनहरू अनुसरण गर्दै ब्लकको साथ प्रोग्रामिंग सुरू गरेको छ।
यदि तपाईंसँग एउटाको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईं यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ.
म पूरै बूस्ट समीक्षा पेन्डि leave गर्छु कि यो लेख ब्लुटुथ समस्या समाधान गर्नका लागि हो।
अन्तमा, यदि तपाईं विकासकर्ता हुनुहुन्छ र / वा ब्लुटुथ फर्मवेयरको बारेमा प्राविधिक जानकारी चाहानुहुन्छ भने, लेगो बूस्ट यसको जान सक्दछ github जहाँ धेरै जानकारी छ। लेखनको बखत उनीहरू LEGO वायरलेस प्रोटोकल .3.0.00.०.०० प्रयोग गर्दैछन्
र यो अधिक जान्नको लागि ब्लुटुथ
1 ट्याब्लेट वा स्मार्टफोनको ब्लुटुथ कसरी LEGO Boost Mov Hub मा जडान गर्ने
2 पिन अवस्थित छैन
3 LEGO Boost को बारेमा